Waa maxay hadiyada ku hadlida carabyada?
Su’aal: Waa maxay hadiyada ku hadlida carabyada?
Jawaab: Saxnaanta hore ee hadalka carabka ee dhacay maalinta Pentecost ee Falimaha Rasuullada 2:1-4. Rasuulada banaanka ayay aadeen oo waxay la wadaageen gosbelka dadka badan, iyaga oo kula hadlayo luuqadahooda gaarka ah: “Waan maqalnaa inaga oo ku dhawaaqeyno layaabka Illaahey ee carabyadeena gaarka ah!” (Falimaha Rasuullada 2:11). Erayga Gariiga carbaha la fasiray waxay si micno leh ula micnatahay “luuqadaha.” Sidaas darteeda, hadiyada carbaha waa ku hadlida luuqada ee qofka uusan garaneynin si markaas loogu maamulo qof ku hadlaa luuqadaas. Gudaha 1 Korintos sadarada 12-14, Bawlos wuxuu ka hadlayaa hadiyadaha mucjisada ahisaga oo dhahayo, “Hadeer, walaalyaal, Haddii aan idin imaado oo aan ku hadlaa carbaha, wanaagee ayaan kuu noqonayaa adiga, illaa aan kuu keeno qaar ka mid ah muujinta ama aqoonta ama wax sii sheegida ama erayga tilmaanta?” (1 Korintos 14:6). Sida waafaqsan rasuulka Bawlos, iyo heshiiska carabka ee ku sharaxan Falimaha Rasuullada, ku hadlida carbaha waxay qiyam u leedahay fariinta maqalka halka Illaah ee luuqadiisa ama luuqadeeda gaarka ah, laakin waa waxtar la’aan ayay u tahay qof walba illaa la fasiro/la turjumo.
Qofka qabaa hadiyada fasriraada carabka (1 Korintos 12:30) wuu fahmi karaa waxa ku hadlayasha carbaha dhahayay xittaa inkastoo uusan garaneynin luuqada lagu hadlay. Fasiraha carbaha ayaa kadib la xiriirayo fariinta ku hadlayaasha carbaha ee qof walba ee kale, marka dhammaan way fahmi karaan. “Sababtaan darteeda qof walba ee ku hadlaa carabka waa inuu ku duceystaa in uu fasiri karo waxa uu dhaho” (1 Korintos 14:13). Gabgabada Bawlos ee la xiriirto carbaha aanan si buuxdo loo fasirin way awood badantahay: “Laakin kaniisada I waxaan badelkii ku hadli lahaa shan eray oo caqliyeysan ee lagu barayo dadka kale badelkii kumanaan erayo ee carabka” (1 Korintos 14:19).
Haddiyada carabka ma maantaa? Marka koowaad Korintos 13:8 wuxuu sheegayaa hadiyada carbaha joogsanayo, inkastoo ay la xiriirto joojinta imaanshaha “wanaagsan” ee 1 Korintos 13:10. Qaar ka mid ah barta ee kala duwanaanshaha ee kacsanaanta falalka Gariiga ee la xiriiro wax sheegida iyo cilmiga “joojinayo” iyo mida carbaha “la joojiyay” sida cadeynta ee kjoojinta carbaha ka hor imaanshaha “wanaagsant.” Iyada oo suurtogal ah, tani si cad uguma caddo ee qoraalka. Qaar ka mid ah sidoo kale waxay tilmaamaan mareenka sida Ishacyaah 28:11 iyo Yoo'eel 2:28-29 sida cadeynta ka hadleyso carbaha waxay aheyd aastaanta xukunka imaanayo ee Illaah. Marka koowaad Korintos 14:22 wuxuu u sharaxayaa carbaha sida “aastaanta ee kuwa aanan aaminsaneyn.” Sida waafaqsan doodaan, hadiyada carbaha waxay ku aheyd digniin Yahuuda in Illaah ku xukumayo Yahuuda diidmada Ciise Masiixi oo sida Masiixi ah. Sidaas darteeda, goortii Illaahey uu xaqiiqdii ku xukumay Yahuuda (baabi’inta Jerusalaam ee Rooma-ka ee A.D. 70), hadiyada carbaha markale uma adeegeyso ujeedadeeda loogu talo galay. Iyada oo aragtidaan ay si suurtogal ah, ujeedada koowaad ee carbaha laga buuxiyay si muhiim ah uma dalbato joojinteeda. Baybalka si guul ah uma cadeyso in hadiyada hadalka ee carabka uu joogsaday.
Isla waqtigaas, haddii hadiyada hadalka ee carabka ay ka firfircooneyd kaniisada maanta, waxaa lagu sameynayaa heshiis ahaan ee Baybalka. Waxay noqoneysaa mid dhab ah oo luuqad caqli ah (1 Korintos 14:10). Waxay noqoneysaa ujeedada xiriirinta Erayga Illaah ee qofka luuqada kale (Falimaha Rasuullada 2:6-12). Waxay ku jireysaa heshiiska amarka Illaah ku siiyay dhinaca rasuulka Bawlos, “Haddii qof ku hadlo carabka, labo—ama sadexda ugu muhiimsan—waa inay ka hadashaa, hal waqtigiiba, iyo qof waa inuu fasiraa. Haddii aysan jirin fasiraad, afhayeenka waa inuu ku aamusaa kaniisada oo la hadlaa nafsadiisa iyo Illaah” (1 Korintos 14:27-28). Waxay sidoo kale nooqneysaa sida waafaqsan 1 Korintos 14:33, “Illaah ma ahan qoraaga jah wareerka, laakin nabada, sida dhammaan kaniisada kirishtaanka.”
Illaah inta ugu xaqiiqsan wuxuu siin karaa nolol qofka ku hadlayo carbaha si ay ugu suurtogeliso isaga ama iyada si ay ula xiriiraan qofka ku hadlaa luuqad kale. Ruuxa Quduuska waa qarannimada ee qeybinta hadiyadaha ruuxa (1 Korintos 12:11). Qiyaas intee howlgalada wax soo saarka ay noqon karto haddii aysan laheyn inay aadaan dugsiga luuqada, iyo waxay si degdeg ah ugu suurtogashay inay kula hadlaan dadka luuqadooda gaarka ah. Si kastaba, Illaah uma muuqdo inuu midaan sameynayay. Carbaha uma muuqdo inay dhacdo maanta ee qaabka ay ku sameysan Baybalka Cusub, inkastoo xaqiiqda in si weyn waxtar u noqoto. Inta ugu badan aaminyaasha sheegtaa inay ku dhaqmaan hadiyada ku hadlida carbaha kuma sameyso sidaas heshiis ahaan ee baybalka kor lagu sheegay. Xaqiiqyadaan waxay u hogaamisay gabagabada in hadiyada carbaha ay joogsadeen ama ay tahay ugu yarana marmarka qorshaha Illaahey ee kaniisada maanta.